In Barca Ay Ugu Cad-cad Soo Bixida, 2 Koox Ee UCL Ugu Fiican & Agaasimaha Cayaara Roma Oo Afka Furtay %
Agaasimaha cayaaraha kooxda kubada cagta AS Roma, Ramón Rodríguez Verdejo oo loo yaqaan Monchi, oo la hadlay BeIN Sports kadib isku aadkii wareega Sideed dhamaadka Champions League, wareegiisa Sideed dhamaadka, kaasoo ay Barcelona, ku aadeen ayaa muujiyey walwalka uu ka qabo.
“Ma dhihi kartid, waxaan haysanay nasiib: waxaan ku aadnay koox aad u xadag, waana kooxda aduunka ugu fiican,” ayuu Monchi yiri.
“Ma jirto koox sahlan oo wareegaan joogtay, marka Barcelona, waana kooxda ugu cad-cad kulankeena, laakiin qofna banaanka uma saari karto Roma.
“Waxaa jirta farxad weyn oo ku saabsan kulanka, waxaana rajeynayaa inaan la tartami karno iyaga,” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Barcelona iyo [Manchester] City waa kuwa ugu dheesha fiican sanad ciyaareedkan, laakiin qof walba waa mid adag sida: Real Madrid, Juve, Bayern…” ayuu sii daba dhigay
“Waa mid caadi ah in Barca, ay kulanka ugu cad-cadahay, sababtoo ah waxay yihiin taariikhdooda fiican – Laakiin waxaan usoconayaa inaan dagaalano, tani waa Banooni – Waa jiri doona labo kulan, wax walba usameyn doonaa soo bixida,” ayuu kusii xiray hadalka.
Sikastaba, Barcelona iyo AS Roma, ayaa waxay wada dheeli doonan lugta koowaad ee wareega Sideed dhamaadka Champions League, 4-ta bisha April ee sanadkaan 2018, iyadoona kulanka koowaad lagu dheeli doono garoonka Camp Nou, oo ay Barca, leedahay
Barcelona vs RomaChampions LeagueMonchi